Kambani Kuongorora / Mbiri - Chengdu SDK Medical Technology Co., Ltd.
Chengdu SDK Medical Technology Co, Ltd. yakavambwa muna 2014. Iyo ikambani inoshanda mune ophthalmic yekurapa yekuongorora michina, inosanganisa "R&D, kugadzira, kutengesa, uye sevhisi". Inotarisa pakupa yakakosha matekinoroji, zvigadzirwa uye masevhisi ekurapa, uye yakazvipira kuDry ziso rakabatanidzwa mhinduro zvigadzirwa uye zvigadzirwa zvemaziso. Anonyatso kuzivikanwa epamusoro-tech emakambani mumunda weR&D uye kugadzirwa. Iyo kambani iri muSainzi neTekinoroji Indasitiri Yekuvandudza Park kumativi ese maviri eChengdu Medical Guta muWenjiang District, Chengdu. Iyo ine yakasimba yesainzi yekutsvagisa mweya uye yepamusoro nzvimbo yekudyara. Parizvino ndiyo yega inogadzira ophthalmic ultrasound michina muSichuan iyo yawana chitupa cheNational III chechiremba chekunyoresa chitupa.
SDK Chiremba inonamira kukosha kukuru kune yakazvimirira yekutsvaga uye kusimudzira, uye ine yepakati timu inoumbwa ine hunyanzvi, hunyanzvi, hwepamusoro-kugona manejimendi manejimendi uye akasimba esainzi ekutsvagisa matarenda. Vashandi veR & D vanofukidza matarenda ekupedzisira-ekupedzisira mumashanu majors: Optics, mechanics, zvemagetsi, algorithms, uye software; ine timu yekutsvagisa sainzi inoshandisa michina yekuratidzira, imaging yekurapa uye chiratidzo chemuchina. Mushure memakore ekutsvagisa nekusimudzira uye maitiro emusika, kambani yakaunganidza ruzivo rwakawanda mumakiriniki eophthalmology, macircuit ekutapurisa Ultrasound uye kugadzirwa kwemifananidzo, uye danho rayo rehunyanzvi riri munzvimbo inotungamira muindasitiri yekumba. Zvese zvigadzirwa zvakagadzirwa zvakasununguka, zvakagadzirwa uye zvakagadzirwa, uye vane kodzero dzakazvimirira dzepfuma. Iyo kambani yakagadzika yakakwana yekugadzira manejimendi maitiro uye yakaenzana mhando mhando manejimendi system.
Pfungwa ye "kutsvaga chokwadi nekuita pragmatic, uye weichuang kurwira kwekutanga" ndiyo sosi yekuvimba kwe SDK kuwana nzvimbo munyika ye ophthalmology. Hunhu hwekutanga, kuenderera kunatsurudzwa kwehunhu hwechigadzirwa ndiko kutsigirwa kwekupona kwekambani yeSADK kutungamira kusimudzira. Ongororo yakazvimirira nekusimudzira, hunyanzvi hwetekinoroji, uye hutungamiriri hwehunyanzvi ndiwo musimboti wemakwikwi ebhizinesi. "Kuvimbika-kwakavakirwa, tekinoroji-yekutanga, uye inoitirwa basa" ndiyo nzvimbo isingazungunuke yeVision Medical. SDK, inotsvaga nyika, inogara ichivandudza ophthalmic diagnostic zvigadzirwa, inogovera pasi rose, uye inoteedzera inowedzera yakakwana yekufungidzira uye yekuona matekinoroji.
Main Bhizinesi Inosanganisira
1. Ophthalmic yekuongorora michina: AB ultrasound michina yemaziso, ndiyo yega inogadzira muSichuan iyo yawana chitupa cheClass III michina yekurapa. Otomatiki yedhijitari yakatemwa mwenje akateedzana, kesi yekuunganidza uye manejimendi sisitimu, uye yayo yekubatsira yekuongorora michina. Fundus magirazi, ruoko-akabata fundus makamera, chiratidzo chekuongorora, akabata ruoko-akabata marambi uye mamwe anotakurika ekuongorora akateedzana uye nezvimwe zvakakosha ophthalmic bvunzo michina.
2. Dziviriro yeziso yakaoma uye michina yekudzivirira yeiyo myopia uye amblyopia: yakaoma ziso muedzo, muoni wekuyedza, yakaoma ziso atomizer, eyelid yekuchenesa pukuta, kupisa kweziso kubvisa kuneta magogorosi, myopia uye amblyopia mishonga yekurapa uye zvimwe zvigadzirwa.
3. Optometry michina: komputa refractometer, corneal curvature mita, yakazara musanganiswa optometry tafura, interpupillary chinhambwe mita, focal mita, yekuona acuity chati, kumucheto kukuya muchina, lens bhokisi nezvimwe zvigadzirwa zvinogona kuve zvinobatanidzwa.
4. Ophthalmic yekuvhiya michina: ophthalmic yekuvhiya maikorosikopu, phacoemulsifiers, YAG lasers, kaseti yemagetsi sterilizers uye mamwe ophthalmic ekuvhiya zvigadzirwa uye zvigadzirwa zvinoshandiswa.
Musimboti wemakwikwi webhizinesi.
"Ongororo yakazvimirira nekusimudzira, hunyanzvi hwetekinoroji, uye hutungamiriri hwehunyanzvi"
Iko kusingachinjiki kweiyo SDK Medical!
"kuvimbika-kwakavakirwa, tekinoroji-yekutanga, uye inoitirwa basa"
Basa:Ita zvekurapa zvine hungwaru uye ita kuti nyika ive nzvimbo iri nani Vision: Ramba uchivandudza, kuvandudza uye kugadzira izvo chaizvo uye zvine hungwaru zvigadzirwa zvekurapa zvemaziso; ive imwechete-yekumira kutenga uye yekugadzira bhizinesi kune ophthalmology, uye shandira vashandisi vepasirese! kukosha kwekutanga: Kubudirira kweVatengi | Isu tinovimbisa kushandira vatengi nemoyo yedu, kuwana vatengi, kuita kurapwa kwakanaka, uye kuita nyika ive nzvimbo iri nani! Shanduko uye Kugadziridza | Isu takatsunga kugadzira, kuramba tichifambira mberi, uye kuongorora sainzi uye tekinoroji, kungoita kurapwa kwekuchenjera uye nekuita nyika nzvimbo iri nani! Kurumidza kuita | Takazvipira kuita nekukurumidza, kushanda zvakanaka, uye nekushingairira kupindura, kugadzirisa matambudziko anonetsa nekumhanyisa nekukurumidza uye nehunyanzvi hunyanzvi, kuita kurapwa kwakangwara, uye kuita kuti nyika ive nzvimbo iri nani! Kubatana | Isu tine timu yakasarudzika ine huchenjeri hwepamusoro, mhando yepamusoro uye kugona kwakanyanya. Isu tinoshanda pamwe chete kuita kurapwa kwekuchenjera uye nenyika zvirinani nehunyanzvi hwedu nesimba! Kugadzira yekutanga-kirasi yakanatswa zvigadzirwa | Isu tinotora "kugadzira zvigadzirwa zvekutanga-kirasi yakanatswa" sekutumwa kwedu.
Tsika Yekambani:Nomoyo wose kudiwa kwemusika Ita zvigadzirwa nemoyo wese Gadzira tekinoroji nemoyo wese Tevera kuvimbika nemoyo wese Nemoyo wese kushandira pamwe uye kuhwina-kuhwina Corporate tsika chinhu chakakosha chikamu chekushanda kwe SDK mabhizinesi ekurapa. Iko kuvandudzwa kwe SDK yekurapa kunoitisa uye kusimudzira-kwakanangwa nekusimudzira, kuteedzera vatengi, vashandi uye neruzhinji nzanga kuti vawane girini, inowirirana uye inoenderera kusimudzira. Iko musimboti we SDK yekurapa yemakambani tsika ndeye "Basa riri papfudzi", "Kubatsira Kukura" uye "Moyo-wakatarisana". Isu tinozvitora semutoro wedu kutsigira kuvandudzwa kwematarenda, "anotarisana nemoyo", teerera kudzidziswa kwevashandi, kutanga kubva "pamoyo", kurudzira masimba ekuchengetedza nemoyo nerudo, uye kutsigira matarenda pamatanho akasiyana kuburikidza nenzira yakazara yedzidzo, kupihwa simba, uye kugona kukura.
Maonero Ebhizinesi:Basa rinoshanda: Vashandi vedu vekutengesa vanogona kukurumidza kupindura kune zvinodiwa nevatengi uye nekupa basa rinoshanda uye rinofunga. Hwechokwadi Simbiso: Chigadzirwa chega chega chinorapwa zvakanyanya senge basa rehunyanzvi nevashandi. Isu tinoteedzera yakasimba yemhando manejimendi manejimendi kuona kuvimbika nekusimba kwezvigadzirwa zvedu. R & D hunyanzvi: Yakazvipira kune iyo R & D yeyakaoma ziso rakabatanidzwa mhinduro zvigadzirwa uye zvevana zvigadzirwa zvemeso. R&D isainzi nehunyanzvi. Yedu yekuvandudza timu iri iboka revasayendisiti vane hushingi hwekuvandudza mumunda wezvekurapa maziso uye vari kusanganawo nedambudziko rekugadzira ramangwana ophthalmic zvishandiso Iri boka revanhu rakashinga kutora mutoro uye rizere neshungu, richipa mikana yakawanda yeramangwana yezvigadzirwa zvekurapa.
Basa rezvemagariro:SDK yakatanga chirongwa chakanangana nekusimudza ziso repasi rose, ichitarisa pane ophthalmology uye pakaoma maziso, ichipa yakanakisa ophthalmic mhinduro. Kuedza kuzadzisa chinangwa che "kuita kurapwa kwekuchenjera uye kuita kuti nyika ive nzvimbo iri nani", apo ichipa mhinduro dziri nani kuna vanachiremba, varwere neruzhinji, kuti vawedzere kukura mukuita kwemakambani.